Tiro Dad ah oo lagu afguubtay duleedka magaalada Wajeer ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya. | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Tiro Dad ah oo lagu afguubtay duleedka magaalada Wajeer ee Gobolka Waqooyi...
Tiro Dad ah oo lagu afguubtay duleedka magaalada Wajeer ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya.
Wajeer (Halqaran.com) – Inta la ogyahay 4 ruux ayaa lagu afduubtay duleedka Magaalada Wajeer ee Gobolka Waqooyi Bari Dalka Kenya.
Guddoomiye ku xigeenka Bariga Wajeer Cumar Bijaa ayaa u sheegay Wargeyska Daily Nation in afarta qof ee la afduubtay ay ahaayeen shaqaale dhisme.
Cumar ayaa xusay in shaqaalaha dhismaha ay wateen Gaari dul banaan ah islamarkaana ay dhisme ka wadeen waddada isku xirta Riba iyo Konton oo hoos taga Magaalada Wajeer.
Guddoomyie Cumar ayaa sheegay in darawalkii Gaariga uu ka baxsaday ragga afduubka geystay kaddib markii uu iska dhigay Nin Taleefan ku hadlaya kaddibna cagaha wac ka dayay.
“Waxaan xaqiijin karaa in wadaha Gaariga ay shaqaalaha wateen uu lugtiisa ku baxsaday, waxaa uu iska dhigay Nin Taleefan ku hadlaya, waana cararay, hadda waxaa uu ku suganyahay goob amaan ah” ayuu yiri Guddoomiye ku xigeenka Cumar Bijaa.
Mas’uuliyiinta u hadlay maamulka Wajeer ma sheegin in dadka la afduubtay ay ajaanib ku jirto ama Kenyaan kaliya yihiin.
Dhaq dhaqaaqa Al-shabaab ayaa iyaguna sheegtay in ay qafaasheen shaqaale Kenyaan ah iyo laba gaari oo midi Cagaf tahay kuwaas oo ay la galeen gudaha Soomaaliya.
Dad lagu afduubtay
duleedka Magaalada Wajeer
Gobolka Waqooyi Bari Dalka Kenya